🥇 ▷ Waa maxay macdan qodista? ✅
Waa maxay macdan qodista?
Qadar badan oo xog ah ayaa la soo saaraa ilbiriqsi kasta waana lagama maarmaan in aqoonta loo kala duwan yahay aaladda macdan qodista kaas oo loo adeegsan karo in lagu maareeyo xogtan weyn isla markaana lagu dabaqi karo algorithm-ka miinada iyo muuqaallada xiisaha leh waqti gaaban.
Macdan qodista Waa hababka loo adeegsado falanqaynta xogta dhinacyo kala duwan iyo aragtiyo kala duwan, helitaanka qaabab qarsoodi ah oo aan hore loo aqoonin, kala soocid iyo isu-ururinta xogta iyo soo koobeynta cilaaqaadka la aqoonsaday.
Tusaale ahaan, macdan qodista macluumaadka waxay shirkadaha ka caawin kartaa inay aqoonsadaan macaamiishooda ugu wanaagsan. Hay’aduhu waxay adeegsan karaan farsamooyinka macdan qodista si ay u falanqeeyaan iibsigii hore ee macmiil gaar ah una saadaalin karaan macmiilku mustaqbalka iibsan karo. Waxa kale oo aad iftiimin kartaa iibsiyada aan caadiga ahayn macaamiisha oo laga yaabo inaad muujiso khayaano.
Shirkaduhu waxay u adeegsan karaan inay ku ogaadaan wax-ka-qabasho la’aanta habraaca waxsoosaarka, cillad soosaarista ama karti-darrooyinka badeecada.
Taariikhda macdanta xogta
Mid ka mid ah qodobbadii ugu horreeyay ee loo adeegsado weedha “macdanta xogta” ayaa waxaa daabacay Michael C. Lovell sanadkii 1983. Waqtigaas, Lovell iyo dhaqaaleyahanno kale oo badan ayaa aragti aan wanaagsaneyn ka qabay howshan, iyagoo aamminsan in tirakoobku u horseedi karo gabagabo khaldan markii lagu ogeysiiyo aqoonta maaddada.
Laakiin sannadihii 1990-yadii, fikradda ah soosaarka qiimaha xogta iyadoo la aqoonsanayo qaababka ayaa caan noqday. Xog uruurinta iyo bixiyeyaasha bakhaarrada xogta ayaa bilaabay isticmaalka buzzword-ka si ay ugu suuq geeyaan barnaamijyadooda. Shirkaduhuna waxay bilaabeen inay ogaadaan faa’iidooyinka suurta galka ah ee dhaqanku leeyahay.
Sannadkii 1996, koox shirkado ah oo ay ka mid yihiin Teradata iyo NCR waxay u horseedeen mashruuc aasaasaya iyo qaabaynta hababka macdanta qodista. Shaqadiisu waxay keentay in Nidaamka Halbeegga Warshadaha loogu talagalay Macdanta Macluumaadka (CRISP-DM). Heerkaan furan wuxuu u qeybiyaa hanaanka macdan qodista ilaa lix waji:
Shirkadaha sida IBM waxay sii wadaan inay kor u qaadaan moodada CRISP-DM ilaa maantadan, iyo sanadka 2015, IBM waxay sii deysay nooc la cusbooneysiiyay oo balaariyay hanaanka aasaasiga ah.
Horraantii 2000-meeyadii, shirkadaha internetka ayaa bilaabay inay arkaan awoodda macdan qodista, iyo dhaqanku runtii waa laga qaaday. In kasta oo weedha “macdan qodista xogta” ay ka buuxsameen buzzwords kale sida “falanqaynta xogta”, “xog weyn” iyo “barashada mashiinka,” howshu wali waa qayb muhiim ah oo ka mid ah dhaqamada ganacsiga. Xaqiiqdii, waa cadaalad in la yiraahdo in macdan qodista xogta ay noqotay qeyb wajigii hore ee maareynta ganacsiga ganacsiga casriga ah.
Noocyada macdan qodista
Saynisyahanada iyo falanqeeyayaasha xogta ayaa adeegsada farsamooyin badan oo macdan qoditaan oo kala duwan si ay u gaaraan yoolalkooda. Kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah waxyaabaha soo socda:
Kooxda Waxay ku lug leedahay helitaanka kooxo leh astaamo isku mid ah. Tusaale ahaan, suuqleeyda inta badan waxay adeegsadaan ururo si ay u aqoonsadaan kooxaha iyo koox hoosaadka suuqyadooda ay bartilmaameedsanayaan. Wadajirka ayaa faa iido kuu leh markii aadan ogeyn waxa ay iskaga mid yihiin xogtaada dhexdeeda.
Kala soocidda U qaybi walxaha (ama shaqsiyaadka) qaybo ku saleysan moodel horey loo soo bartay. Kala-soocistu badanaa waxay timaaddaa ka dib kooxaynta (in kasta oo aad sidoo kale ku tababaran karto nidaam lagu kala saaro xogta ku saleysan qeybaha uu qeexay sayniska ama falanqeeyaha xogta). Kalaqeybintu waxay cadeyneysaa kooxaha ka imaan kara macluumaadka jira, iyo kala soocidda ayaa gelineysa xogta cusub kooxda ku habboon. Nidaamyada aragga kumbuyuutarrada sidoo kale waxay isticmaalaan nidaamyada kala-soocidda si ay u gartaan waxyaabaha sawirrada ku jira.
Asociation Aqoonso xogta sida caadiga ah laga helo midba midka kale. Tani waa farsamada kaxeysa matoorada talinta, sida marka Amazon He uu soo jeediyo in haddii aad iibsato shay, sidoo kale waad jeclaan kartaa shey kale.
Ogaanshaha Anomaly Raadi xog aan ku habboonayn qaabka caadiga ah. Farsamooyinkan ayaa aad waxtar ugu leh ogaanshaha khayaanada.
Dib u soo nooleyn Waa qalab tirakoob oo horumarsan oo ku badan falanqaynta saadaalinta. Waxay ka caawin kartaa shabakada bulshada iyo soosaarayaasha dalabka guuritaanka inay kordhiyaan kaqeybgalka, waxay sidoo kale ka caawin kartaa saadaalinta iibka mustaqbalka iyo yareynta halista. Soo nooleynta iyo kala soocida waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa qaab geed oo faa’iido u leh duruufo badan oo kala duwan.
Macdanta qoraalka Falanqee sida badanaa dadku u isticmaalaan ereyada qaarkood. Waxay waxtar u yeelan kartaa falanqaynta dareenka ama shakhsiyadda, iyo sidoo kale falanqaynta daabacadaha shabakadaha bulshada ee ujeeddooyinka suuqgeynta ama si loo ogaado inay dhici karto inay dhici karto xogta shaqaalaha.
Soo Koobid koox koox macluumaad ka dhigaysa qaab aad u adag oo si fudud loo fahmi karo. Tusaale ahaan, waad u istcimaali kartaa soo koobitaanka inaad ku abuurto jaantusyo ama aad xisaabiso celcelis ahaan xog go’an. Tani waa mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee loo yaqaan oo la heli karo ee macdanta xogta.
Aaladda macdan qodista
Hay’aduhu waxay leeyihiin qalab fara badan oo macdanta qodista ah markay karaankooda ahs lahaansho iyo il furan. Qalabkan waxaa ka mid ah bakhaarada xogta, qalabka ELT, aaladaha nadiifinta xogta, dashbolojiyeyaasha, aaladaha falanqaynta, aaladda qoraalka falanqaynta, aaladaha sirdoonka ganacsiga iyo kuwa kale.